Dawladda Itoobiya oo ka Hadashay Arrimo Xasaasi ah oo ay ka Wadahadleen Guddoomiyaha KULMIYE
Addis ababa (Dawan)- Ra’iisul-wasaaraha Itoobiya, Md. Hailemariam Desalegn, ayaa shalay xafiiskiisa ku qaabilay wefti uu hoggaaminayo Guddoomiyaha ahna Murrashaxa Madaxweynaha ee xisbal-xaakimka Somaliland ee KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi oo socdaal shaqo ku jooga waddanka Itoobiya.
Wakaallada wararka ee Itoobiya ee ENA, ayaa warbixin ka qortay kulanka Ra’iisul-wasaare Hailemariam Desalegn la yeeshay Weftigii Guddoomiye Muuse Biixi Cabdi, warbintaas waxa soo turjumay oo warkan ka qoray Tifaftiraha Guud ee Wargeyska Dawan, Cumar Maxamed Faarax.
“Ra’iisul-wasaaraha Itoobiya, Hailemariam Desalegn iyo wefti ka socday Somaliland ayaa falanqeeyay sidii kor loogu qaadi lahaa xidhiidhka ka dhexeeya labada dhinac. Itoobiya iyo Somaliland ayaa iska kaashada dhinacyada Ganacsiga, Kaabeyaasha dhaqaalaha iyo arrimaha nabadgelyada.
Kulankii shalay dhexmaray Ra’iisul-wasaare Hailemariam iyo weftiga Somaliland ee uu hoggaaminayay Guddoomiyaha xisbal xaakimka KULMIYE ee Somaliland, Muuse Biixi Cabdi, waxa lagu lafo-guray sidii si horleh kor loogu qaadi lahaa cilaaqaadka labada dhinac.
Waxa shirkan lagu gorfeeyay doorashada Somaliland ka qabsoomaysa iyo sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga Somaliland iyo Itoobiya ee ku wajahan Ganacsiga, kaabeyaasha dhaqaalaha, nabadgelyada iyo qodobbo la xidhiidha dekedda. Sida uu wakaallada ENA u sheegay madaxa warbaahinta ee xafiiska Ra’iisul-wasaaraha Itoobiya, Zadg Abreha, waxay labada dhinac ka wada hadleen sidii loola diriri lahaa argagixisada ay ka mid tahay Al-shabaab iyo in iskaashiga Somaliland iyo Itoobiya kor loogu sii qaado.
Guddoomiye Ku-xigeenka kowaad ee xisbiga KULMIYE, Maxamed Kaahin Axmed, ayaa u caddeeyay ENA in weftigoodu ay wadahadallo wanaagsan la yeesheen Ra’iisul-wasaare Hailemariam oo isla soo qaadeen taabogelinta xidhiidhkii jiray ee u dhexeeyay Itoobiya iyo Somaliland.
Maxamed Kaahin waxa uu intaas ku daray in Somaliland ay doonayso in iskaashigii ay la lahayd Itoobiya ee dhaqaalaha iyo siyaadadda la sii ballaadhiyo, waxaanay sii adkayn doontaa cilaaqaadka labada dhinac gaar ahaan ganacsiga iyo nabadgelyada.”
Geesta kalena, madaxa warbaahinta ee xisbal-xaakimka KULMIYE, Mr. Cali Jaamac Maxamed, ayaa warsaxaafadeed uu ka soo saarya kulankaas wuxuu ku sheegay
“Qodobada ugu mudan ee Guddoomiye Muuse Biixi iyo Ra’iisal-wasaare Hailemariam kaga wadahadleen kulankaasi waxa ka mid ah;
Waxa kaloo ay ka wadahadleen sidii labada dal uga sii wadashaqayn lahaayeen adkaynta nabadda iyo xogta ammaanka ee mandaqada. Guddoomiyaha, ahna Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi waxa kulanka uu la qaatay Ra’iisal-wasaaradaha Itoobiya ku wehelinayey masuuliyiinta kala ah; Guddoomiye-ku-xigeenka kowaad ee xisbiga KULMIYE Md. Maxamed Kaahin Axmed, Siyaasiga Axmed Muumin Seed iyo Safiirka Somaliland ee Itoobiya Md. Cali Salaan Jirde (Cali Shoombe). Guud ahaan kulankaasi waxa uu ku soo gabogaboobay jawi farxad iyo is afgarad ah.”
Weftiga Guddoomiyuhu shalay galab ayay ku soo laabteen caasimada Hargeysa.